Ama-eBooks e-Forex eBooks - Landa i-Free Forex Trading eBook
Landa i-Free Forex eBook
Iqoqo eliphelele lama-eBooks esandulele anikezwe yi-FXCC. Kucatshangwa njengensiza efundiswa kakhulu e-intanethi ethandwa kakhulu kubo bonke abathengisi kungakhathaliseki ukuthi bayini ulwazi.
I-eBook ngayinye iyisiqondiso esiphelele esikusiza ukuthi uqonde imibono yokuhweba esemqoka bese udala isu lokuhweba le-forex elihambisana nemigomo yakho ngayinye. I-FXCC njengengxenye yocwaningo layo lemfundo, inikeza i-eBook ngayinye mahhala.
Isu Lokuhweba Okufanele Ukufanisa Ukuphila Kwakho Landa i-eBOOK FUNDA KABANZI
Le eBook igxile ekusweleni inganekwane yokufanisa ubuntu bakho nokuhweba. Ngokusebenzisa amasu wangempela ahlolwe futhi ahlolwe, iziphakamiso zenziwe ngendlela yokuqinisekisa ukuthi ukuhweba kwakho kufana neqhinga elikhethiwe nokuthi ungalungisa kanjani ingqondo yakho ukuze usebenze.
Abahwebi Mindset Landa i-eBOOK FUNDA KABANZI
Okubaluleke kakhulu lapho ukuhweba i-Forex kube nokulawulwa kwemizwelo yakho. Le eBook izama ukuchaza izinyathelo zendlela yokufinyelela isimo sengqondo lapho umuntu angaqeda khona izinqumo ezingokomzwelo ezingabangela ukuhweba ukulahlekelwa futhi uchaza amaphuzu okumele alandelwe ukuze kuthuthukiswe uhlelo lokuhweba oluphumelelayo.
Ukuphathwa Money Landa i-eBOOK FUNDA KABANZI
Le eBook ichaza ukubaluleka kokufeza ukuphathwa kwemali njengengxenye ebalulekile yecebo lokuhweba. Izibonelo zinikezwe ngemiphumela nemiphumela yokuphathwa kokungalungi okulungile nokungalungile, kanye nokuthi ukuyeka kungakuvikela kanjani i-akhawunti yokuhweba futhi kusindise ukulahlekelwa.
Ngokuqondile Ngokucubungula Landa i-eBOOK FUNDA KABANZI
Imakethe ye-forex yemakethe iguqukile eminyakeni edlule futhi izinhlobo eziningana ze-broker sezivele zivele. Le eBook izogxila ku-STP -Straight Through Processing kanye nezinzuzo zalomodeli kula maklayenti.
Indlela yokwakha uhlelo lokuhweba oluwina Landa i-eBOOK FUNDA KABANZI
Esinye sezici ezibaluleke kakhulu zokuhweba kudala uhlelo lokuhweba oluqinile lwamadwala, lapho kuzokwakhiwa khona izisekelo zentuthuko nempumelelo ngayinye. Kungakhathaliseki ukuthi izinga lethu linikeza ulwazi, futhi noma ngabe sichaza kanjani ikhono kanye nekhono, ngaphandle kohlelo lokuhweba lokubhekisela futhi silondoloze, simane simemeza ngokumemeza ebumnyameni futhi sithatha amahlaya okungahleliwe.
Ukuhlaziywa Kwezobuchwepheshe Nokuyisisekelo Landa i-eBOOK FUNDA KABANZI
Ukuba nekhono elihle ekuhlaziyweni kwemakethe kutholakala ngabathengisi ngabanye abanamakhono okuzikhethela nokuzinikezela ekuthandweni kwabo kokuhweba. Leli bhuku libukezwe ngokucacile ngezici ezihlukahlukene zokuhweba okuyisisekelo kanye nobuchwepheshe.
Ukusetshenziswa kwe-Stop Orders Landa i-eBOOK FUNDA KABANZI
Imakethe ye-FX ijwayele ukuba nokunyakaza okungahleleki futhi kuyadingeka ukuthi kube nokulawulwa okufanele endaweni ukuze kuvinjelwe ukuthi kungenzeka ukuhweba okulodwa okuholela ekubhubhiseni isipiliyoni sabo sokuhweba. Funda ukuthi ungalinciphisa kanjani futhi ulawule ukulahlekelwa kwakho ngokusebenzisa ngokuphumelelayo imiyalo yokuyeka.
Uhlelo lwakho lokuhweba Landa i-eBOOK FUNDA KABANZI
Uhlelo lwakho lokuhweba luba ngumgudu womsebenzi wakho wokuhweba, kufanele uqukathe izinto ezibucayi ezizosekela imisebenzi yakho yokuhweba nezinhloso. Lolu hlelo aludingeki ukuba lube yincwadi enzima kakhulu ekuqaleni. Funda ukuthi ungakha kanjani uhlelo lwakho lokuhweba.
Isingeniso kwi-Basics of Price Action Trading Landa i-eBOOK FUNDA KABANZI
Isizathu esiyinhloko abadayisi abanolwazi abazokwazi ukukhuthaza ukuhweba kwe-PA, kungenxa yokuthi babheka intengo njengendlela eyodwa, isibonakaliso esibaluleke kakhulu, kumashadi abo kanye nesikhathi esizimele. Babheka intengo kanye nesenzo samanani esiqala njengesiphumo, njengombonakaliso oholayo, hhayi isibonakaliso sokungena.
Scalping njengendlela Strategic Trading Landa i-eBOOK FUNDA KABANZI
I-Scalping isitayela esingahlonishwa kakhulu nesingaqondakali sokuhweba. Abadayisi abaningi abangenalwazi bayoluthatha njengokumane nje bezama ukuzuza amapayipi amancane ebhange, ngezikhathi ezincane. Kodwa-ke, lokhu kuyiphutha lokusuka kwe-scalping njengesenzo futhi kwembula ukuthi incazelo ichaziwe kanjani ngokuhamba kwesikhathi, ikakhulukazi ngesikhathi kuthuthukiswa ukuhweba okusekelwe kwi-intanethi.
Ukudayiswa kweSuku njengesitayela sokuhweba Landa i-eBOOK FUNDA KABANZI
Njengesitayela nendlela yokuhweba, ukuhweba kwansuku kungenye yezitayela ezithandwayo kakhulu zokuhweba futhi mhlawumbe isitayela sokuhweba okuyinto iningi labathengisi abathengisayo abalindele ekugcineni bahlanganyele, noma baqhubekele phambili, kanye (noma uma) bangashintsha umsebenzi wabo futhi ekugcineni bazinikezele isikhathi esigcwele, emsebenzini nasembonini.